I-AliveCor ifuna ukushenxisa umsebenzi we-ECG weApple Watch eMelika ngolwaphulo mthetho lwe patent | Ndisuka mac
AliveCorInkampani ethengisa izixhobo zomthengi zeECG kunye neenkonzo, ithatha inyathelo lokuchasana nelungelo elilodwa lomenzi ngokuchasene neApple inyathelo elinye ukuya nesikhalazo kwiKhomishini yoRhwebo yaMazwe ngaMazwe yaseMelika. Into oyikhangelayo yile ukungenisa ukuvalwa kwazo zonke iimodeli "zokwaphula umthetho" zeApple Watchkubandakanya i-Apple Watch Series 4 kunye no-5.
Inkampani iAliveCor iqalise iinkqubo eziyimfuneko zokucela ngokusesikweni ukuba ukungeniswa kwazo zonke iimodeli ezingavumelekanga Ukophula umthetho wakho we-ECG. Le yindlela kuchazwe ngayo uthotho lwe-Apple 4 kunye no-5. Nangona kunjalo, uthotho lwe-Apple lwe-6 alukhankanywanga, kodwa oku akuthethi ukuba ayifakwanga kamva, into ebonakala inengqiqo.
I-AliveCor kwingxelo ithe ukuhanjiswa kwesikhalazo linyathelo elinye, phakathi kwezinye, kukuba AliveCor inika ukufumana isigqibo ngokunxulumene noko bakukhankanyileyo njenge «Ikopi eyenzelwe ngabom iApple yeTekhnoloji yeAliveCor«. Oku kubandakanya ukubanakho ukuthatha ufundo lwe-ECG kwi-Apple Watch, kunye nokwenza uhlalutyo lokubonisa kwentliziyo.
Ityala elalichasene noApple lafakwa ngoDisemba. Ukudityaniswa kobuchwephesha bezinto ze-ECG kunye nesoftware yenkxaso kutyholwa ukuba kwaphula amalungelo awodwa omenzi wechiza aneendlela zokufumana kunye nokubeka iliso kwimithambo yentliziyo ngezixhobo ezinxitywayo. Kodwa esi sicelo sokuba iApple isuse umlinganiso weApple Wacth iya kwelinye inyathelo. Kwaye kuyingozi ukuba izinto zihamba kakuhle kule nkampani.
Ndihlala ndikhusela iApple Watch njengenye yezixhobo ezibaluleke kakhulu iApple enayo ngenxa yendima yayo kwicandelo lezempilo. Ingayinto elihlazo ukuba inokuphelela kwinto enye kwiimpikiswano zetekhnoloji. Ngethemba ukuba kufikelelwe kwisivumelwano, ukuba ngaba i-AliveCor ilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-AliveCor ifuna ukususa umsebenzi we-ECG kwi-Apple Watch e-US ngolwaphulo mthetho